စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများ: ငလျင်လှုပ်ခဲ့ရင် ဘယ်ကိုပြေးမှာလဲ?
Home သုတပဒေသာ ငလျင်လှုပ်ခဲ့ရင် ဘယ်ကိုပြေးမှာလဲ?
Post under သုတပဒေသာ at 3/28/2011 10:52:00 PM Posted by kyaw myo
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထဲမှာ ငလျင်ကလည်း ကြောက်စရာကောင်းလှပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ကံကောင်းနေကြသေးလို့ ကိုယ်တိုင်မကြုံဖူး မခံစားမိသေးဘူး။ အကယ်၍ ငလျင်လှုပ်ခဲ့ရင် ခုံအောက် ကုတင်အောက်ပဲ ပြေးပုန်းမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် တံခါးပေါက်ဝမှာပဲ ရပ်နေမှာလား? ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေမှာလား? အဲဒီလို တွေးကြည့်စဉ်းစားမိကြပါသလား? အောက်ကစာကို ဆက်ဖတ်သွားကြည့်ပါ တစ်နေ့နေ့ ခင်ဗျားအသက်ကို ကယ်တင်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အလွယ်ဆုံးရှင်းပြရရင် အဆောက်အအုံတစ်ခု ပြိုကျတဲ့အခါ မျက်နှာကျက်အလေးချိန်ဟာ အောက်မှာရှိတဲ့ ပရိဘောဂများ အရာဝတ္ထုများကို ကျိုးပဲ့ပျက်စီးစေပြီး အဲဒီဘေးမှာ တြိရိဂံနေရာလေး ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ တြိရိဂံနေရာက ပရိဘောဂရဲ့ ဘေးမှာနော် အောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတြိရိဂံနေရာကို ကျနော်က “Triangle of Life” လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အောက်ဖက်က ပရိဘောဂပစ္စည်းဟာ ကြီးမားခိုင်မာလေ ဘေးကဖြစ်စေနိုင်တဲ့ တြိရိဂံနေရာလွတ်ဟာ ပိုကြီးမားမယ်၊ ဒါကြောင့် အဲဒီလိုနေရာကို အသုံးပြုပြီး ပုန်းခိုတဲ့လူဟာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်တစ်ခါ တီဗွီသတင်းထဲမှာ ပြိုကျနေတဲ့ အဆောက်အအုံတွေကို မြင်ရင် တြိရိဂံလိုနေရာ ဘယ်နှစ်ခုတွေ့နိုင်မလဲဆိုတာ ရှာကြည့်ပါ၊ အများကြီးတွေ့ရမှာပါ။ ကဲ ငလျင်ဖြစ်လာရင် အသုံးတကယ်ဝင်မဲ့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်နည်းတချို့ကို ပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ လူတိုင်းလိုလို ခုံအောက်မှာ ကားထဲမှာ ၀င်ပုန်းကြတယ်၊ အဲဒီလိုနေရာမှာ ပုန်းကြတဲ့လူတွေ ဖိမိပြီးသေကြရတယ်။
၂။ ငလျင်လှုပ်ချိန်မှာ အပြင်ပြေးထွက်ဖို့ အချိန်မရှိခဲ့ရင် ဆိုဖာခုံ၊ ကုတင်၊ စားပွဲကြီး၊ ရေခဲသေတ္တာ စတဲ့ ကြီးမားတဲ့ အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုရဲ့ ဘေးကပ်လျက်မှာ ပုဇွန်တုပ်ကွေး ကွေးပြီးနေရင် တြိရိဂံပုံနေရာလွတ်လေးက သင့်ကို ကယ်တင်နိုင်မှာပါ။
၃။ ငလျင်လှုပ်တဲ့အခါ သစ်သားအိမ်တွေကတော့ အလုံခြုံဆုံး အိမ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုကျခဲ့ရင် နေရာလွတ်အများကြီး ဖြစ်စေပါတယ်။ အုတ်နဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်တွေ ပြိုကျရင် အုတ်ခဲတွေတစ်ခုစီကွဲကုန်ပြီး ဒဏ်ရာများစွာရစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကွန်ကရစ်အိမ်လို ခန္ဓာကိုယ်တွေကို ဖိညှပ်ကျေပျက်စေခြင်း မရှိပါဘူး။
၄။ အကယ်၍ ညဖက်အိပ်နေချိန်မှာ ငလျင်လှုပ်ခဲ့ရင် အလွယ်တကူ ကုတင်ဘေးကို လှိမ့်ချလိုက်ပါ။ တြိရံဂံနေရာလွတ်ဟာ ကုတင်ဘေးကပ်လျက် မှာ ရှိလာမှာပါ။
၅။ အဆောက်အအုံပြိုကျတဲ့အခါ အိမ်တံခါးပေါက်ဝမှာ ပုံးနေတဲ့လူက တံခါးမကြီးဟာ အတွင်းဖက် သို့မဟုတ် အပြင်ဖက်ကိုလှဲကျပြီး အပေါ်ကမျက်နှာကြက် ပြိုကျဖိမိပြီး သေကြရပါတယ်။
၆။ ငလျင်လှုပ်တဲ့အခါ လှေကားပေါ် လုံးဝမသွားပါနဲ့။ ငလျင်ကြောင့် လှေကားပျက်မကျခဲ့ရင်တောင် လူတွေအများရဲ့ အလေးချိန်နဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ပြိုကျနိုင်ပါတယ်။ အဆောက်အအုံ မပျက်စီးခဲ့ရင်တောင် လှေကားကို ထပ်မံစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
၇။ အပြင်ဆုံးအိမ်နံရံဖက် သို့မဟုတ် အိမ်အပြင်ဖက်ကို နီးနိုင်သမျှ အရောက်သွားနေပါ။ အိမ်အတွင်းထဲမှာနေသူဟာ အပြင်ထွက်ဖို့လမ်းကြောင်း ရှာဖွေနိုင်ဖို့ ပိုမိုခက်ခဲပါတယ်။
၈။ ကားမောင်းနေရင်း ငလျင်လှုပ်တဲ့အခါ ကားအတွင်းမှာပဲ နေကြသူများဟာ အပေါ်ကလမ်းတွေ ပြိုကျဖိမိပြီး အားလုံးသေကြရတယ်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဆန်ဖရန်စစ်စကို ငလျင်မှာ Nimitz Freeway လမ်းမကြီးပေါ်မှာ အဲဒီလို ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကားထဲမှာနေနေကြတဲ့လူတွေ အားလုံးသေကြတယ်။ အကယ်၍ သူတို့က ကားထဲကထွက်ပြီး မိမိရဲ့ကားဘေးမှာပဲ ထိုင်နေရင် သို့မဟုတ် လှဲနေရင် အလွယ်တကူ အသက်ရှင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ကရစ်တိုင်လုံးကြီး ကားပေါ်တည့်တည့် ထက်ချိုးကျတဲ့ ကားတွေကလွှဲရင် ပျက်စီးကြေမွှသွားတဲ့ ကားတွေရဲ့ဘေးမှာ ၃ ပေအမြင့်နေရာလွတ်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
၉။ ကျနော့်အတွေ့အကြုံအရ ပြိုကျသွားတဲ့ သတင်းစာတိုက်လို စက္ကူတွေအများကြီးရှိတဲ့ အဆောက်အအုံထဲမှာ စက္ကူထုတ်တွေရဲ့ဘေးနားမှာ နေရာလွတ်အများကြီး ဖြစ်နေတာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ “The triangle of live saves lives” ဆိုတာလေးကို ထပ်မှတ်ထားလိုက်ပါ။ ဒီစာလေးကို လက်ဆင့်ကမ်းရင်း လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ကြပါစေလို့…။
http://myitkyinaonline.com မှ ကူးယူပါသည် ရေးသားသူ - ကျော်ကျော်
2 comments: on "ငလျင်လှုပ်ခဲ့ရင် ဘယ်ကိုပြေးမှာလဲ?"
ahlat miaye said...